PBT ne PET intambo Factory - China PBT kanye PET intambo Abakhiqizi, abahlinzeki
Mon - Sat ngo-7: 00 AM kuya ku-6: 00 AM
Intambo yebhulashi yezimboni
PBT futhi PET intambo
Sawubona, woza uthintane nemikhiqizo yethu!
Hot ukudayiswa pa610 intambo pro ...
Hot Yamadivayisi Inayiloni intambo PA ...
Intengo eshisayo PA 66 yebhulashi intambo
0.5mm obala PA6 crimp ...
Inayiloni pa 610 intambo izinyo ...
Ikhwalithi ephezulu futhi enemibala ye-PBT intambo yamazinyo
Intambo yebhulashi le-pbt linokuqina okuhle nokumelana nomthelela, futhi ngenxa yokumelana kwayo okuhle kwe-asidi nokumuncwa umswakama ophansi, ilungele izindawo ezimanzi zokusebenza. Isetshenziselwa ukucubungula amabhulashi wamazinyo, amabhulashi ezimboni nokuhlanza amabhulashi, amabhulashi we-nail polish, njll.
Imicu ye-Antibacterial PBT yamabhulashi amazinyo
Ukunwebeka kwe-PBTfilament kungcono kunaleyo yocingo lwenayiloni, kepha ukumelana kwayo nomhuzuko akukuhle njengokufika ku-610. Ukusebenza kwe-PBT kuthambile, futhi kufaneleke kakhulu ekuhlanzweni nasekunciphisweni kwezingxenye ezinhle, njengokuhlanzwa kwendawo yemoto.
I-PBT ne-PET intambo yokwenza isixubho
intambo yesilwane ne-pbt Izinwele zithambile ngokulingene futhi zinzima, ukumelana nokushisa okuphezulu, ukululama okuqinile okugoba, ukuguquguquka nokuqina kokugqokwa, akulula ukugqashula nokukhubazeka, nempilo yesevisi ende
Intambo yePlastiki ye-PET yebhulashi lasekhaya
Ngaphezu kwezakhiwo ze-PBT, i-PET inezici ezilandelayo: amandla nobulukhuni; ukumelana nokukhathala, ukumelana nokungqubuzana, ukumelana namakhemikhali, nokumelana nokushisa
I-Xinjia Nylon CO., LTD.
Ngemibuzo ngemikhiqizo yethu, sicela ushiye i-imeyili yakho futhi usithinte kungakapheli amahora angama-24.
Imikhiqizo Eshisayo - Ibalazwe
Amagama agqamile A, Amagama agqamile B,